Resident Evil: The Final Chapter (2016) - Burmese Subtitle
R 2016 107 min Action, Horror, Resident Evil, Sci-Fi
အခုတင်ဆက်ပေးမယ်ကားလေးကတော့ 2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ရုံတင်ကားတွေထဲကမှ တစ်ကားဖြစ်တဲ့ Resident Evil The Final Chapter ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တောတို့ရဲ့ Resident Evil ကားရဲ့ ဇာတ်ကောင် Alice ရဲ့ အရင်ကားတွေလိုပဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ Zombies တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုက်ိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါ
Alice တစ်ယောက်ဒီတစ်ကားမှာတော့ Umbrella Corporation ကိုအမြစ်ပြတ် ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် ကြိုးစားပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ
လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်က ပါမောက္ခ Jame Marcus ဆိုသူက သူ့ရဲ့ သမီးလေးဆီမှာ ကူးစက်နေတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကို ကုသဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေရှာခဲ့တယ်
စမ်းသပ်ရင်း ကုသရင်း နောက်ဆုံးတော့ တီ-ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ် သူ့သမီးအတွက် တီ-ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်
Jame Marcus ရဲ့သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် ကုမ္ပဏီတွဲဖက်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Dr.Isaacs က Jame Marcus ကိုလုပ်ကြံပြီး ကုမ္ပဏီကိုအပိုင်စီးပြီး တီ-ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သလို တီ-ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပျံ့ နှံ့ကူးစက်စေခဲ့တယ်
Umbrella Corporation ရဲ့အောက်ခြေကနေ ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကနေစပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးနေရာအနှံ့အပြားကို ရောဂါပိုးတွေကူးစက်စေခဲ့ပါတယ်
အမေရိကအစိုးရက ရေဂါပိုးကူးစက်သူတွေက်ို နျူကလီးယားဗုံးနဲ့ရှင်းလင်းခဲ့သော်လည်း မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး နောက်ဆုံးတော့ Dr Isaacs က တီဗိုင်းရပ်စ်ကို ဖျက်စီးမယ့် Antivirus တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ် တစ်ကမ္ဘာလုံးကရောဂါကူးစက်သူအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြီး ကမ္ဘာသစ်ထူထောင်ဖို့နဲ့ Alice ကိုသတ်ဖို့ပါပဲ
Alice တစ်ယောက် အသက်ရှင်ကျန်သူများကိုရှာဖွေရင်း Umbrella ရဲ့ ကွန်ပြူတာဦးနှောက် Red Queen နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး Umbrella ကိုဆန့်ကျင်မယ့်အကြောင်း Red Queen ကပြောပြပြီးသောအခါ……
Alice တစ်ယောက် Umbrella ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မလား? Dr.Isaacs ကိုရော သတ်နိုင်ပါ့မလား? အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ သူတွေရောရှိအုံးမှာလား? ကားနာမည်အတိုင်းပဲ နောက်ဆုံးကားဖြစ်သွားမလား? ဆိုတာတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ ပြောကြားရင်း….
Review Credit to Morningstar Nainglin
Quality – Blu-Ray 1080p 8CH
Option5Letsupload.co 1.68 GB 1080p
Option6Pcloud.com 1.68 GB 1080p